संघीयता अधिकार हो की ‘नाक र छाला’ मात्र ?: चन्द्र भण्डारी Darpansansar News
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद चन्द्र भण्डारी प्रखर र स्पष्ट बक्ताका रुपमा चिनिन्छन् । केही साता अघि पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी सीमाकंनको सम्बन्धमा संविधान सशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी त्यसको विरुद्धमा देखिए ।
नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारले संशोधन गरेर अघि बढ्ने अडान लिइरहँदा उनी पाँच नम्बर प्रदेशका विभिन्न शहरहरुमा गएर विरोध स्वरुप सडकमै उत्रिएका थिए । पार्टी र सरकारकै विरोध गरेर सडकमा देखिएका नेता चन्द्र भण्डारीसँग दर्पण संसारले गरेको कुराकानीको अंश:
तपाईं हिजोआज पार्टी निर्णय बिपरित बोल्दै हिडिरहनु भएको छ त ?
म कुनैपनि कुरामा पार्टी विपरित काम गरेको छैन । संविधान संशोधनका विषयमा भने मेरो फरक मत अवश्य छ । यो विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो । संशोधन प्रस्ताव हाम्रा नेताहरुले बाध्यताले वा देखाउन दर्ता गरेका हुन् । यसको पनि परिक्षणको घडी हुँदै छ । देशको बारेमा बोल्दा वा व्यख्या गर्दा त बोल्न पर्यो नी त, केही त बोल्न पर्यो नी त । ५ नम्बर प्रदेश विखण्डन गर्नु राष्ट्रका सबै कुराको समाधान हो कि होइन भनेर जवाफ त दिनपर्यो त्यसै दर्ता गरेर मात्रै पनि त हुँदैन ।
इलाम र झापाको विभाजन गर्दा वा प्रदेश छुट्टै बनाउँदा वा धनुषा र सिन्धुली बनाउँदा वा गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा तलको तराईको भाग छुट्टिदा वा कञ्चनपुर, कैलाली र डडेल्धुराको विभाजन हुँदा त्यहाँको जनप्रतिनिधी वा त्यहाँको राजनीतिकक दलका नेताहरु वा जनताहरुको भूमिका हुने कि नुहने भन्ने मेरो भनाइ हो र हामीले ल्याएको संघीयता अधिकार होकी नाक र छाला मात्र हो ।
अहिले ल्याएको प्रस्ताव समाधान होकि विगठनको सुरुवात हो । यी कुराहरु मैले उठाउँदै हिँडेको हुँ । यो कुरामा गम्भीर हौं । यदि हामी कसैलाई देश चाहिएको छैन भने दिए भैहाल्यो नी ? सिक्किम जस्तो बनाए भइगो नि । यदि होेइन भने छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो । मैले पार्टीको कुनै कुराको अवज्ञा गरेको छैन् ।
पार्टी बिपरीत अडान लिंदा कारवाहीमा परिएला जस्तो लाग्दैन् ?
पार्टीले कारवाही गर्नुपर्छ । नचाहिने काम गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ । यदि मैले गरेका कुरा नचाहिने हुन भने मलाई कारवाही गर्नुपर्छ । तर देश पाँच वर्षमा अल्पमतमा पर्यो देश विखण्डनमा जान थाल्यो भने त्यसको जवाफ पनि त कसैले दिन पर्ला ।
प्रदेश नम्बर ५ लाई मधेश-पहाड छुट्याउने गरी संसोधन प्रस्ताव त दर्ता भैसक्यो नि ?
हाम्रो देशमा एउटा जर्बजस्त विचार लाद्न खोजिएको छ । पहाड र तराई मिल्न हुन्न भनेर । त्यसै सन्र्दभमा केही पहाड नजोडिकन तराई वा पहाडले केही तराईको नजोडिकन देशको विकास हुन सक्छ कि सक्दैन हामीले यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । कुनै पनि काम गर्दा पछिसम्म त्यसले राष्ट्रलाई कस्तो प्रभाव पर्छ । जनतालाई के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हेर्नपर्छ । नेपाल चीन र भारतको विचको देश हो । धेरै कुरालाई चलाउन खोज्यौं र उथलपुथल गर्न खोज्यौं भने हाम्रो देश अपठ्यारोमा पर्छ । हामीले संविधान बनायौं, संविधान बनाउदा कांग्रेस, माओवादी र एमाले सबै एकै ठाउँमा मिलेर बनायौं ।
अब संविधान कार्यन्वयन गर्ने बेलामा नयाँ कुराहरुलाई लिएर आयौं भने ९१ प्रतिशत जनप्रतिनिधीले बनाएको संविधान कार्यन्वयन गर्दै जाने क्रममा संगै संविधान बनाएको १ सय ८२ सिट भएको पार्टीलाई छोडेर गयौं भने हामी संविधान कार्यन्वयन गर्न सक्छौ कि सक्दैनौं, अर्को कुरा भारतले हिजो हामीलाई संविधान नबनाउ भनेर संविधान जारी गर्नुभन्दा ३ दिन अगाडी आएर भारतको विदेश सचीवले भन्दा हामीले मानेनौं, अडान लियौं संविधान बनाउनुपर्छ भनेर त्यो बेला सबै पार्टी मिलेर बोल्यौं । भने अहिले के फरक भयो र हामी अनावश्यक कुरा गरेका छौं ।
नागरिकताको कुरा गर्नुपर्दा पहाड, हिमाल वा तराई सबैले पाउनुपर्छ । विश्व धरातलमा कसैले नागरिकता पाउने नपाउने भन्ने हुँदैन । नेपाल जस्तो सानो देशमा हामीले ल्याएको व्यवस्थामा तराईका जनताहरुलाई अरु व्यक्तिहरुलाई अनावश्यक रुपमा नागरिकता दिएर तराईका जनताहरुलाई अल्पमतमा पार्ने, त्यहाँका जनताहरुले सुख सुविधा लिन नपाउने जस्ता कुरा गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो ।
र भाषाका कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो देशमा विभिन्न भाषा छन् । थारु, मैथली भोजपुरी लगायतका भाषाहरु नेपालका परिचय दिने भाषाहरु हुन् । ती भाषालाई हामीले प्रदेशमा लागु गर्ने सक्छौ । भने यस्ता कुराहरु छोडेर अनावश्यक कुरामा लाग्नु हुँदैन् ।
संशोधन प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित भए के गर्नुहुन्छ ?
नेपाल धेरै नै कमजोर हुन् । नागरिकताको आधारमा पाँच वर्षमा अल्पमतमा पर्छ । तराईका जनताहरुले पाउने कुनै पनि सेवा सुविधा पाउदैनन् । बिहारीकरण हुन्छ अब नेपाल । सबैभन्दा ठूलो असर तराईका जनतालाई पुग्छ । र सिंगो देश अल्पमतमा पर्छ । जनसंख्याको आधारमा ।
किन मधेश-पहाड छुट्याउन खोजिएको होला ?
मधेस पहाड छुट्याउन खोज्नु एउटा अल्पज्ञानको अभाव हो । किनभने मधेसको जनतालाई जलस्रोत सँग जोड्ने हो । सम्पन्नतासँग जोड्ने हो । तराईलाई पहाड र पहाडलाई तराई । आज बंगालले दार्जिलिङ र सिक्किमलाई दुलही जस्तो सिंगारेर राखेको छ । गर्मीको समयमा बस्ने ठाउँ बनाएको छ । त्यस्तै हाम्रा हरेक पहाडहरु तराइका निम्ती बन्न सक्छन् । पहाडमा जलस्रोत, खानीहरु, जडिबुटीहरु छन् त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
जर्बजस्ती अरुको लहैलहैमा लागेर मधेश पहाड छुटयाउन खोजिएको हो । हामी भारतविना मन्त्री सांसद पनि बन्न सक्दैनौं भन्ने कमजोर दृष्टिकोणका कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
मधेस र पहाड अलग भए भनेर विरोध किन गरिरहनु पर्यो ?
म पहाडको मान्छे पहाडको भन्दा तराइका जनताको पक्षको मान्छे हो जो मैले बारम्बार भन्दै पनि आएको छु । मैरे कुरा नक्कल पनि गरिरहेका छन् एक थरिले के गरिरहेका छन् भने म काठमाडौंमा बसेर मेरो ढलेको सिमाना त मैले राख्न सक्दो रहेनछु नी । भारतको तटबन्धले गर्दा मेरो तराई ढुब्दै छ भने त्यसको विरुद्धमा त म लड्न सक्दो रहेनछु नी ।
उता सुस्ताका जनताहरु आफ्नो देश घेरेर बसिरहेका छन् । सिमाना घेरेर बसेका छन् । तीनलाई मुद्दा लगाइदिँदा अहिलेको वर्तमान सरकार एक शब्द पनि बोल्न सक्दो रहेनछ । त्यसकारणले त्यहाँको मिथिला, भोजपुरी थरुहट वा मुस्लिमहरु यी सबैको पहिचान तीनीहरुले बोल्ने भाषाको संरक्षणको निम्ती र देशको सिमानाको सुरक्षाका लागि त्यहाँका जनताहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र समाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक अधिकारको हामी सम्मान गर्नपर्छ र सुरक्षित गर्नैपर्छ ।
त्यहाँको समाज र संस्कृति बुझन पनि हामीले काम गर्नपर्छ । तीनलाई हामीले पहाडको विकासमा जोड्नैपर्छ । जलस्रोतमा विजुली निकाल्दा त्यहाँका जनताहरुलाई हामीले सेयर बनाउन पर्छ । तीनैका निम्ती हामीले प्रदेश, आयोगहरु गठन गरेका छौं । तर त्यसको नाममा एकथरि व्यक्तिहरु जसलाई तराईका जनताहरुले अनुमोदन पनि गरेनन् तीनीहरुसँग हाम्रा नेताहरु पनि लहैलहैमा लागेर पहाड र तराईको विखण्डन गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो । जनप्रतिनिधीलाई थाहै नदिइकन राती राती संशोधन प्रस्ताव गरेर त निकास त निष्कदैन ।
तपाईको पार्टी सम्मिलित सरकारको काम कारवाहीको समिक्षा कसरी गर्नुभएको छ ?
यो कुनै सरकार नै होइन, अरुको काम गर्नका निम्ती हामीले बनाएको संविधान बिर्गानका निम्ती केही कमाउनका लागि आएको हो यसले कुनै काम गर्छ र काम गर्न आएको पनि होइन यो सरकार जस्तो होइन । त्यसैले यो सरकारको कुनै काम नै छैन् ।
यहि अवस्थामा २०७४ माघ ७ भित्र तिन तहको निर्वाचन सम्भव छ ?
सम्भव छ, सम्भव गराउनुपर्छ जुन हिसाबले शेरबहादुर जीको जुन खालको अभिव्यक्ति आइरहेको छ । चुनाव गराउछु भन्ने यसमा हामी सबै लाग्नुपर्छ ।